I-Wolf tattoo: incazelo kanye nophawu | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
USusana godoy | | Ama-Animal Tattoos
El impisi tattoo Yinto wonke umuntu ayithandayo ngobuhle bayo nangesibindi sayo. Kubantu abaningi impisi inezimpawu ezinkulu ngenxa yomlando wayo nencazelo yayo. Kwamanye amasiko, izimpisi ziyizilwane ezihlasela ebusuku, zingabazingeli abangochwepheshe futhi njengoba nje ezinye ziyizilwane ezihlaba umxhwele, ezinye ziyazesaba. Kwamanye amasiko, izimpisi zingamaqhawe, abaholi abakhulu nabavikeli babantu abangenacala.
Banedumela elihlukahlukene kakhulu futhi kubonakala sengathi impisi iyisilwane esikhethekile esiyohlala sinendawo ezinhliziyweni zethu ngoba singesinye sokhokho babangane babantu abakhulu: inja.. Izimpisi kuze kube phakade babonwe njengamaqhawe anolaka ngaphandle kokwesaba, njengezilwane ezidla ezinye futhi ukuthi abantu babemesaba ngokubabheka njengezilwane.
1 I-tattoo yempisi imele izikhulu zakhe
2 Wolf tattoo incazelo
3 Impisi ngolimi lwethu
4 Izinhlobo zama-wolf tattoos
5 Ama-tattoos amahle kakhulu empisi
I-tattoo yempisi imele izikhulu zakhe
Impisi idlule ezinhlosweni eziningi kuya ngesikhathi nangesiko, kepha iqiniso ukuthi ihlala futhi iyisilwane esingakholeki futhi esifanele ukuhlonishwa ngaso sonke isikhathi.
Ezizweni eziningi zaseMelika naseMexico, impisi ibonwa njenge-totem yamandla namandla, kepha futhi njengensika enkulu yokuhlakanipha nomhlahlandlela ongokomoya. BangamaMelika Omdabu, izimpisi zingaphezulu kakhulu kwesilwane sasendle futhi kubhekwa ukuthi iyi-totem yempilo yangakusasa ngoba iyasiza ukuqonda ukufa nokuhlangenwe nakho nesimo sayo esidlayo.
Lapho izimpisi zihlangana nowesifazane, zihlala naye unomphela. Bangabazali abanothando ezinganeni zabo futhi bayohlala bezivikela noma ngabe yiziphi izimo. Baziwa futhi njengezilwane eziqotho nezikhulumayo.
Umfanekiso wempisi ekhala enyangeni uwuphawu lwamandla akhe okuveza amandla akhe esifundeni noma ukubiza amalungu epakethe ndawonye. Kuyisithombe esihle kakhulu se-tattoo futhi ngaphezu kwakho konke, kulayishwe uphawu nencazelo yomuntu onquma ukuthola leyo tattoo yempisi.
Ukuhewula akusikho ukuphela kwethuluzi impisi okufanele ixhumane ngalo nontanga yalo, futhi lisebenzisa nolimi lomzimba ukudlulisa imizwa enhlobonhlobo enjengokuthi: ukwesaba, ulaka, uzwelo ngisho nokuthanda amalungu epakethe layo. Ngoba izimpisi mfundi othandekayoFuthi inemizwa njengoba ingumuntu ophilayo onobuntu bayo.
Impisi isebenzisa umuzwa wokuhogela, ukuzwa nokubona ukukhombisa uhla oluyinkimbinkimbi lwemizwa ukuze ikwazi ukuxhumana. Kulezi zinhlobo zokuziphatha angakhombisa izindlela zokuziphatha ezifundwe kubazali bakhe nakwamanye amalungu ephakethe.
Wolf tattoo incazelo
El impisi tattoo ingakhombisa izincazelo ezilandelayo:
Kusobala ukuthi izincazelo zizohluka ngokuya ngomuntu kanye nokuhlangenwe nakho abe nakho empilweni yakhe, ngoba ngamunye angahumusha izimpawu zempisi ngezindlela ezihlukile. Mhlawumbe uthanda izimpisi ngoba ube nenhlanhla yokuhlangana nabanye futhi uqonde ukuthi banjani kanye nobukhosi obubonakala kubo uma bephathwa ngenhlonipho nothando kusukela bezalwa. Noma mhlawumbe uyayithanda ngoba ifanekisela okuthile okubalulekile kuwe nasemndenini wakho.
Ngaphezu kwalokho, impisi futhi iwuphawu lwenhlanhla nokuzala, incazelo ebaluleke kakhulu kubantu abaningi. Ngokwesiko laseMongolia bakholelwa ukuthi bayinzalo yezimpisi yingakho beyibona njengesilwane esingcwele. Abantu abaningi babheka impisi njengesidalwa esiheha inhlanhla nokuchuma.
EJapan bacabanga nokuthi impisi ingumuntu onamandla nokuthi ivikela abantu ezifweni noma ebubini obuthile. Yini enye, eJapan bacabanga nokuthi impisi isiza imibhangqwana engazali ukuba izale.
Ngokwesiko laseChechen, impisi ingaphezu kwesilwane sasendle, iwuphawu lokuziqhenya ngobuzwe. Bakholelwa ukuthi umama wempisi uwuphawu oluphezulu lwamandla nokuvikelwa okusiza abantu ukuthi bazizwe bavikelekile.
Impisi ngolimi lwethu
Njengamanje impisi iyisilwane sasendle esisihloniphayo nesisithandayo futhi esisidonsela ukudlidlizela okuhle, abantu abaningi bazidweba tattoo impisi tattoo mhlawumbe ngenxa nje yobuhle bayo futhi ukudlulisa amandla namandla.
Kepha ngaphandle kokuqaphela, impisi ikhona ngisho nasolimini lwethu lwamanje ngoba sinethonya lokuba khona kwayo. Mhlawumbe wake wakhuluma into efana nale: 'Ngilambe kabi ngingadla inkomo'. Ngokusobala ubungeke uyidle inkomo, kepha kuyindlela yokuqwashisa ngokuthi ulambile kangakanani. Ezinye izinkulumo ezihlobene nethonya lempisi esikweni lethu yilezi:
Impisi eyedwa. Impisi eyedwa ibhekisa kumuntu othanda ukuba yedwa futhi azitholele indlela yakhe, kude nokudideka okungenziwa isixuku ukuthi sizizwe.
Impisi enesikhumba semvu. Kushiwo abantu ababukeka njengabantu abalungile futhi ngisho namaphrofayela aphelele futhi empeleni bangaba ngabantu abesabekayo.
Ubuntu beWolf. Uma bekutshela ukuthi unobuntu bempisi, ngaphandle kokungabaza bakunikeza ukuncoma, kufanele ufunde izincazelo ukuze wazi ukuthi bathini.
I-También ikhona imidwebo yempisi yesizwe ezixhunyaniswe nezindikimba ezingaqondakali kanye nomhlaba oyindida ngokwengeziwe. Ngakolunye uhlangothi, uma uthatha isinqumo sokuthwebula umdwebo wogebhezi lwempisi, kufanelekile ukusho ukuthi umele amandla amnyama. Uma uzidweba impisi ebukhali uzobe ukhombisa ukumelana kwakho nesibindi sakho ebusweni bempilo futhi uma uyidweba ngomdlandla futhi uyabhonga, lapho-ke uzobe ukhombisa sonke isibindi sakho, ukuzivikela nokuzizwa uvikelekile.
Le yinto ebaluleke kakhulu okufanele uyihlole esimweni osifunayo yenza tattoo yempisi emzimbeni wakho, kodwa khumbula ukuthi okubaluleke ngempela yilokho okushoyo kuwe, noma ngabe kungasho ukuthini kwabanye abantu noma emasikweni.
Izinhlobo zama-wolf tattoos
Njengakwimidwebo eminingi, ama-tattoo wempisi abengeke ashiywe ngemuva. Zinesici esivamile esivamile futhi lokho ukuthi ungazijabulela ngezindlela ezihlukile ngaphandle kokushintsha incazelo yazo noma i-silhouette yazo uqobo.
En los imidwebo yempisi yesizwe, sizobona ukuthi uyinki omnyama uzoba ngumlingisi ophambili kanjani. Ngaphezu kwalokho, i-silhouette yesilwane izokwakhiwa ngenxa yaleyo migqa efana nale nto. Indlela eyingqayizivele futhi yangempela yokunikeza impilo ku-tattoo yakho. Ngaphezu kwalokho, iphethe nemibono emikhulu yendabuko ebilondolozwe ezizweni zasendulo.
Ukuthinta okuncane kakhulu kugxila kulesi sitayela. I- ama-tattoos we-geometric wolf Zizokwakhiwa ngemigqa, kanye nemibuthano noma onxantathu. Kepha kholwa noma ungakukholwa, bonke ngokuvumelana okugcwele, bazuza umphumela omuhle, olula futhi wesimanjemanje. Kuthiwa lezi zinhlobo zezimpawu zazaziswa kakhulu kwaze kwaba yiRenaissance, yize kubonakala sengathi nanamuhla, zisenjalo namanje.
I-Los imidwebo yempisi engalweni kuyenzeka kaningi ukuthi ahlobise ingxenye engenhla yawo. Yize uma ufuna ukwengeza okwengeziwe okuthe xaxa, ungahlala uzidweba ngemuva kwengalo yakho, eduze kwendololwane.
Uma uthanda ukuhlanganiswa kombala, khona-ke uzokuthanda ama-tattoos wempisi yamanzi. Uyinki omnyama wehliselwa ohlangothini olulodwa ngoba ukuqhuma kokukhanya kuzoba umlingiswa ophambili. Ama-shades amahle kakhulu ahlangana ku-tattoo yohlobo oluthile kodwa ngaphandle kokukhohlwa ukuthi impisi nayo iyisibalo esifanelekile.
Uma ufuna ukugqoka impisi tattoo ngemuva, lapho-ke kuzoba yindawo enhle ongaya kuyo ngemiklamo emikhulu. Ungahlala uhlanganisa ubuso besilwane nenyanga noma ukuhewula kwaso, nakho okudingeka kakhulu kulolu hlobo lokuklama.
I-Los izimpisi ezihewulayo zingubuthakathaka obukhulu. Sesivele sishilo ngabo kepha ngaphandle kokungabaza, nabo bangabalingisi abakhulu. Uma impisi iklewula enyangeni, izokhombisa ubufazi. Kepha ngasikhathi sinye futhi kungamandla, ukuvikelwa noma ukuhlakanipha.
Njengamanje sonke sesibonile isaga "Twilight". Yebo, isimilo se- UJacob omnyama inenzuzo yokuphenduka impisi. Kepha enguqulweni yakhe yomuntu, une-tattoo engalweni. Idizayini yesitayela sesizwe engahlukaniswa njengakuyo, igqamisa ikhanda lempisi. Ngokuqinisekile usuvele uqaphele!
Ama-tattoos amahle kakhulu empisi
Yize kukuningi futhi kuhlukahlukene, kuhlale kukhona okunye okugqama kancane. Ngakho-ke uma ufuna imibono nogqozi, lapha sibashiya ngesimo sezithombe. Ama-tattoos amahle kakhulu empisi kukhona kutholakale kalula! Yini oyithandayo?.
I-Wolf ne-mandala tattoo, isikhalazo ohlangothini lwakho lwasendle nolwezinzwa
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Ama-Animal Tattoos » Impisi tattoo
Sawubona, likhulu kangakanani ikhasi lakho, ngiyabonga kakhulu ngemiklamo nolwazi
Iqiniso ukuthi lezi zinto zingiheha kangangokuba kwesinye isikhathi ngiye ngifune ukuba yimpisi
USônia Maria kusho
Lihle kakhulu ikhasi lakho ngilithande kakhulu um gram salu
Phendula uSônia maria
UDeiver Di Salvatori kusho
Ngithola izincazelo zakho zicace kakhulu ngokwedizayini nezincazelo kubaluleke kakhulu, ngoba ngale ndlela kubathandi be-tattoo kulula ngathi ukwazi ukuthi ichaza ukuthini tattoo esizoyifaka esikhunjeni sethu. Imininingwane eqoqiwe iyajabulisa kakhulu.
Phendula uDeiver Di Salvatori
Ngiyabonga kakhulu, Arturo!. Umdwebo omuhle! 🙂
uMaira garcia kusho
Ngiyazithanda izimpisi, iphupho lami ukudweba i-tattoo emhlane wami wempisi nezingane zayo engithumela ephaketheni lami yooooo
Impendulo ivela ku- Maira Garcia:
Ama-tattoo anomlotha wabathandekayo bakho asevele ekhona
Isizini yesibili ye 'Tattoo a dos' ifika kwi-MTV Spain